Iindaba-Matshi 8, 2017 Bestway oilfield Inc.
Matshi 8, 2017 Bestway oilfield Inc.
Wamkelekile ngokufudumeleyo uMnu Gus.Dwairy, intloko ye-BESTWAY OILFIELD INC., E-US, ikhokele igqiza labatyelela i-CEPAI.
Ngomhla we-8 kweyoKwindla ngo-2017, intloko ye-BESTWAY OILFIELD INC., Mnu Gus Dwairy, Mnu Ronny.Dwairy kunye noMnu Li Lianggen beza eCepai kutyelelo kunye nophando ukuxoxa ngomyalelo weemveliso zepetroleum oomatshini kwi-2017.
Ngo-2017, zonke ishishini petroleum oomatshini ishishini. Emva koMnyhadala woNyaka oMtsha waseTshayina, inani leeodolo zemveliso zasekhaya nakwamanye amazwe bezisanda. Inkampani yethu inyuse iinzame zokugaya abantu kwaye yafumana inani elikhulu labasebenzi bezobuchwephesha bokubeka imveliso, eyabeka isiseko esiluqilima somgangatho kunye nokuhanjiswa okuqinisekileyo kwee-odolo ngo-2017.
I-Bestway Oilfield Inc. yase-United States yenze uhlolo olungqongqo kwimveliso, kuvavanyo, kwizixhobo zendibano nakwimeko yemveliso yenkampani yethu. Bancoma kakhulu amandla emveliso enkampani yethu kunye nenqanaba lolawulo. Bavakalise ukuzithemba kwabo kwiimveliso ezibonelelwa nguCepai, kwaye bazimisele ukwenza iiodolo ezingakumbi kuCepai.
Sizimisele ukwenza eminye imizamo ngo-2017 kwaye senze ukuthengisa kufikelele kwinqanaba elitsha!